SQL Server Iweghachite Ngwá Ọrụ. SQL Server Mmezi Software. MDF Mmezi Ngwá Ọrụ.
DataNumen SQL Recovery bụ kasị mma SQL Server mgbake ngwá ọrụ n'ụwa. Ọ nwere ike ịrụkwa faịlụ MDF rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi ma weghachite data gị dị ka o kwere mee, si otú a na-ebelata ọnwụ na nrụrụ faịlụ.
4.90 / 5 (site na 1,646 votes)
Gịnị mere DataNumen SQL Recovery?
Iweghachite bụ most njirimara dị mkpa nke ngwaahịa SQL. Dabere na ule zuru oke anyị, DataNumen SQL Recovery nwere ọnụọgụ mgbake kachasị mma, dị mma karịa ndị asọmpi ndị ọzọ n'ahịa!
Mụtakwuo banyere otu DataNumen SQL Recovery na-ese anwụrụ mpi
Nanị irè, nke pụtara ebube. Ana m ekele gị nke ukwuu, ọkachasị maka n ’otu ọzọ m gaara enwe ike ị nweta faịlụ ahụ m kwesiri
Nanị irè, nke pụtara ebube. Ana m ekele gị nke ukwuu, ọkachasị n'ihi na ma ọ bụghị na agaraghị m enwe ike ịnweta faịlụ m ga-agbake, n'ihi mkpọchi nke ugbu a iji nwee covid-19. M ga-agbasa ezigbo okwu ọnụ banyere gị.
Ụtụtụ ọma. Ana m anwale software gị ka ị rụzie nchekwa data sql. Mgbe ị gbasịrị ngwa gị, enwere m ike ịhụ data m niile ọzọ :)
William Stanford kwuru
OWO APP! NTA! DAALỤ NKE UKWUU.
Septemba 2nd, 2019
Enweghị nsogbu mgbake. Ọ dị ezigbo mma
Aha ya bụ Nelson Fernandes
Ambernath, India, India
Nnukwu ngwanrọ. Na-eme kpọmkwem ihe ọ na-ekwu, na n'ụzọ dị mma enyi na enyi ...
Ọnye na -bụ Ricardo Freitas?
Super ngwá ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma. Ngwaọrụ nchekwa data
Onye isi ala & onye guzobere Hey Flyer
Ngwọta maka Followinggbasokarị njehie na Nsogbu na SQL Server MDF Njikwa
xxx.mdf abughi faili nchekwa data mbu
xxx.mdf abughi ezigbo isi ihe ntinye ederede
Sql Server Achọpụtara A Eriri Ezi Kwadoro I / O Error: Ezighi ezi Checksum
Sql Server Achọpụtara A Ezi-uche Kwadoro I / O Error: Torn Page
Naghachi Hichapụ Records ma ọ bụ Tebụl na database
Main Akụkụ na DataNumen SQL Recovery v6.0
nkwado SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019.
Nkwado iji weghachite usoro na data na tebụl.
Nkwado iji weghachite ụdị data niile, gụnyere ụdị XML.
Nkwado iji weghachite kọlụm na-enweghị ntụpọ.
Nkwado iji weghachite ederede ehichapụ.
Nkwado iji weghachite indexes na igodo mbụ.
Nkwado iji weghachite echiche, ihe na-akpali akpali, iwu na ndebe iwu.
Nkwado iji weghachite usoro echekwara, ọrụ scalar, inline table-valued works and multistatement table-valued works.
Nkwado iji weghachite ma kpochapụ ihe ezoro ezo.
Nkwado iji weghachite ọtụtụ faịlụ, gụnyere faịlụ MDF na faịlụ NDF metụtara ya.
Nkwado iji weghachite data natara na faịlụ MDF.
Nkwado iji weghachite data MDF / NDF site na faịlụ VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) na-emebi emebi (*. Vmdk), Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) faịlụ (*. Vhd), Acronis True Image faịlụ (*. Tib), Norton Ghost faịlụ (*. gho, * .v2i), Windows NTBackup files (*.bkf), ISO oyiyi faịlụ (*. Iso) na Nero oyiyi faịlụ (*. Nrg).
Nkwado iji weghachite SQL Server data site na temporary tempdb.mdf faịlụ.
Nkwado iji weghachite MDF na NDF faịlụ buru ibu dika 16TB.
Nkwado ịrụzi MDF faịlụ na mgbasa ozi rụrụ arụ, dịka diski diski, Zip diski, CDROM, wdg.
Nkwado ịrụzi ọtụtụ MDF faịlụ.
Ejikọtara ya na shei Windows, n'ihi ya ị nwere ike ịrụzi faịlụ MDF na gburugburu (pịa aka nri) menu nke Windows Explorer n'ụzọ dị mfe.
iji DataNumen SQL Recovery iji Nweta Nrụrụ Aka SQL Server Databases
mgbe gị SQL Server MDF faịlụ rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi na i nweghị ike imeghe ha kwesịrị, i nwere ike iji DataNumen SQL Recovery i scanomi MDF faịlụ na-agbake dị ukwuu data ha ka o kwere mee.
Cheta na: Tupu na-agbake ọ bụla rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi MDF faịlụ na DataNumen SQL Recovery, biko mechie ngwa ndị ọzọ ọ bụla nwere ike gbanwee faịlụ MDF.
Họrọ faịlụ MDF mebiri emebi ma ọ bụ mebiri emebi ka arụzie.
Can nwere ike itinye aha faịlụ MDF ozugbo ma ọ bụ pịa
bọtịnụ ịchọta faịlụ MDF ka arụzie na kọmputa mpaghara.
Ọ bụrụ na enwere otu ma ọ bụ ọtụtụ faịlụ NDF jikọtara na faịlụ MDF mebiri emebi, mgbe ahụ ịnwere ike ịgbakwunye ha:
Ọ bụrụ na ị maara usoro nke isi mmalite mebiri emebi MDF faịlụ, mgbe ahụ ị nwere ike dee ya:
Ọ bụrụ na ịkọwapụtaghị usoro ahụ, wee nwee ndabara, DataNumen SQL Recovery ga-anwa nyochaa isi mmalite MDF faịlụ ma chọpụta usoro ahụ na akpaghị aka.
Site na ndabara, DataNumen SQL Recovery ga-echekwa faịlụ MDF ahụ edozi na faịlụ ọhụrụ aha ya bụ xxxx_fixed.mdf, ebe xxxx bụ aha faịlụ MDF isi. Ọmụmaatụ, maka isi MDF faịlụ Damaged.mdf, aha ndabara maka faịlụ echekwara ga-emebi -_fixed.mdf. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iji aha ọzọ, biko pịa ma ọ bụ tọọ ya dịka:
Nwere ike itinye na ofu faịlụ aha ozugbo ma ọ bụ pịa
bọtịnụ na-agagharị na họrọ ofu faịlụ.
Mgbe mgbake usoro, ị nwere ike start SQL Server Management Studio ma nweta nchekwa data emetụtara.
bọtịnụ, DataNumen SQL Recovery ga-akpali a "Jikọọ na SQL Server"igbe, dị ka n'okpuru:
Need kwesịrị ịtọ ndị Aha Aha na Nyocha n'ihi na SQL Server dịka ọmụmaatụ kọmputa dị n'ime obodo ma ọ bụ nke dịpụrụ adịpụ, wee pịa bọtịnụ "OK". Mgbe ahụ DataNumen SQL Recovery ga start na-enyocha ma na-arụzi faịlụ MDF. Ogwe ọganihu
Mgbe mgbake usoro, ọ bụrụ na isi iyi MDF faịlụ nwere ike natara nke ọma, ị ga-ahụ a igbe ozi dị ka nke a:
Ugbu a ị start SQL Server Management Studio ma nweta data dị na nchekwa data MDF.
Nkwado icheta ntọala njikọ.
Nkwado iji weghachite isi igodo.
Nkwado iji weghachite ihe onwunwe enweghị ike nke otu kọlụm.
DataNumen SQL Recovery A tọhapụrụ 5.9 na Mee 3, 2021
DataNumen SQL Recovery 5.4 weputara na Disemba 15th, 2020
DataNumen SQL Recovery A tọhapụrụ 5.2 na November 2nd, 2020
DataNumen SQL Recovery A na-ahapụ 5.1 na July 11th, 2020
nkwado SQL Server 2019.
DataNumen SQL Recovery A tọhapụrụ 5.0 na June 5, 2020
Kpochapu ihe na-abaghi ​​uru.
DataNumen SQL Recovery A na-ahapụ 4.5 na Eprel 25, 2020
DataNumen SQL Recovery 4.4 weputara na March 9th, 2020
Nkwado iji weghachite data XML.
DataNumen SQL Recovery 4.3 weputara na Disemba 31th, 2019
DataNumen SQL Recovery A na-ahapụ 4.2 na Septemba 8, 2019
DataNumen SQL Recovery A na-ahapụ 4.1 na Eprel 11, 2019
DataNumen SQL Recovery 4.0 weputara na Disemba 8th, 2018
DataNumen SQL Recovery 3.2 weputara na October 10th, 2018
DataNumen SQL Recovery A na-ahapụ 3.0 na August 15th, 2018
Meziwanye arụmọrụ na nhazi nnukwu data.
Belata ebe nchekwa oriri na nhazi nnukwu data.
DataNumen SQL Recovery 2.8 weputara na March 6th, 2018
nkwado SQL Server 2017
DataNumen SQL Recovery 2.7 weputara na March 26th, 2017
nkwado SQL Server 2016.
DataNumen SQL Recovery A na-ahapụ 2.6 na Feb 3rd, 2017
Nkwado idozi njehie nchekwa data ọzọ.
DataNumen SQL Recovery A na-ahapụ 2.5 na February 12th, 2016
Belata ikike nchekwa.
DataNumen SQL Recovery A tọhapụrụ 2.4 na October 1, 2014
DataNumen SQL Recovery A tọhapụrụ 2.3 na Mee 12, 2014
Nkwado iji weghachite data MDF / NDF site na faịlụ VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) na-emebi emebi (* .vmdk), Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) faịlụ (* .vhd), Acronis True Image files (* .tib), Norton Ghost faịlụ (* .gho, * .v2i), Windows NTBackup files (*.bkf), ISO oyiyi faịlụ (* .iso) na Nero oyiyi faịlụ (* .nrg).
DataNumen SQL Recovery A tọhapụrụ 2.2 na March 18, 2014
DataNumen SQL Recovery 2.1 wepụtara na Jenụwarị 9, 2014
nkwado SQL Server 2014.
DataNumen SQL Recovery A tọhapụrụ 2.0 na Disemba 7, 2013
Belata ebe nchekwa oriri n'oge mgbake usoro.
DataNumen SQL Recovery A tọhapụrụ 1.1 na August 3, 2013
Nkwado maka faịlụ mmepụta na usoro MDF.
DataNumen SQL Recovery A tọhapụrụ 1.0 na Mee 11, 2013
nkwado SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012.
Nkwado iji weghachite ụdị data niile, belụsọ maka ụdị XML.
Database mgbake ụlọ, tinyere mgbake ngwaọrụ rụrụ arụ Microsoft Access ọdụ data na DBF ọdụ data.